nothing | Saturngod
Leaveareply Testing Sketch 2
1 Reply Sketch2Trail version လေး download ချပြီးတော့ ဆွဲကြည့်တာ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေတယ်။ သုံးရတာလည်း လွယ်တယ်။ US$50 (S$ 65) လောက်တော့ ပေးရမယ်။ အခု Pixelmator နဲ့ သုံးတာ အဆင်ပြေပေမယ့် သူက drawing ထက် photo editing ကို အားထားသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ Photoshop အစားထိုး အနေနဲ့ Pixelmator + Sketch2ဆိုရင် တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီ။ Sketch2က Vector ဖြစ်တဲ့ အတွက် စိတ်ကြိုက် size ကို ဆွဲပြီး ရင် လွယ်လွယ် ကူကူပြောင်းလို့ရပါတယ်။ Adobe Fireworks နဲ့ တူတယ်လို့ ဆိုရမယ်။
ကျွန်တော် Sketch2ကို သုံးပြီး စမ်းဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေကတော့
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing on April 26, 2013 by saturngod. Firefox won’t fix Zawgyi issue on Mac
1 Reply Firefox ကို ဇော်ဂျီ နဲ့ သုံးမရတာနဲ့ ချက်ခြင်း firefox ရဲ့ bugzilla မှာ report တင်ခဲ့ပါတယ်။
Jonathan Kew က ဒီလို ပြန်ဖြေထားပါတယ်။
The issue here is that the Zawgyi-One font lacks proper layout tables for Myanmar. When loading fonts for “complex” scripts (that require appropriate glyph shaping for correct rendering), Firefox on OS X checks whether the font has the necessary tables, and if not, it will skip it and fall back toadifferent font.
This font is apparently using the Unicode Myanmar codepoints, but is designed to be used -without- proper shaping support, by instead encoding the text ina“visual” way rather than properly following the Unicode standard for representing Myanmar text.
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged firefox, Zawgyi on April 22, 2013 by saturngod. Update Ornagai Android 2.1.2
Leaveareply version 2.1.2
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged Android, ornagai on April 15, 2013 by saturngod. Ornagai Android 2.1
4 Replies Ornagai Android ကို Update လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ Samsung Galaxy Tab27.0 နဲ့ HTC OneX + မှာ အဆင်ပြေတာ နဲ့ တင်လိုက်တယ်။ Android 2.1 ကနေ Android 4.0 ကို မစမ်းဖြစ်လိုက်ဘူး။ Database မှာ table တစ်ခု ကျန်ခဲ့တာကြောင့် Play Store ပေါ်ကနေ Ornagai 2.0 ကို သွင်းတဲ့ သူတွေ အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဦးစွာ ပထမ တောင်းပန်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ Frozen Keyboard အသစ်မှာ ဇော်ဂျီ typing ပြဿနာကို fixed လုပ်လိုက်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် search မှာက ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ နောက်ပြီး Enter Key event အစား \_n event ဝင်လာတဲ့ အတွက် အဲဒါကို ပြန်ပြင်ရတာကြောင့် မနေ့ညက ချက်ခြင်း fix မလုပ်ပေးလိုက်နိုင်ဘူး။
မောင်ပြုံး (@yelinaung) က မြန်မာစာ စာလုံး မပေါ်တာကို report လုပ်မှ English To Myanmar မှာ result အမှန် မပေါ်ဘူးဆိုတာကို သိလို့ ပြန်ပြင်ထားပေးပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged Android, ornagia on April 13, 2013 by saturngod. Ornagai Android new version
Leaveareply အစကတော့ ဒီနေ့ ပြီးအောင် ရေးပြီး တင်ဖို့ပဲ ။ သို့ပေမယ့် ဇော်ဂျီ normalize နဲ့ Syllable break က java အတွက် မရေးရသေးတော့ မနက်ဖြန်မှ ဆက်ရေးပြီး တင်တော့မယ်။ အခု version အသစ်မှာ
၁။ မြန်မာ To English
၂။ English အသံထွက် (android မှာ ပါတဲ့ TTS ကို အသုံးပြုထားသည်)
၃။ Database update လုပ်ထားသည်။
ဒီ အပတ်အတွင်းတော့ အားရင် အားသလို ရေးပြီး တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။
အခုတော့ Samsung Tab27.0 မှာ စမ်းပြီး ရေးကြည့်နေတယ်။ ပြီးမှ HTC One X+ မှာ ထပ်စမ်းကြည့်ရအုံးမယ်။ အဓိက ပြဿနာက UI ကို xml နဲ့ ကောင်းကောင်း align မလုပ်တတ်သေးတာပဲ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged Android, ornagai on April 10, 2013 by saturngod. Sample Tweet from iOS Bootcamp
Leaveareply iOS Bootcamp တုန်းက Restful အကြောင်းရှင်းပြရင်း AFNetworking သုံးပြီး twitter လိုမျိုး app အကြမ်းလေး ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲတုန်းက မေးကြတာက အိမ်ရောက်ရင် ဘယ်လို စမ်းမလဲ ။ Server မှ မရှိတာ။ Mongodb , node.js တင်ပြီး စမ်းလို့ ရပေမယ့် စကာစ သူတွေ အတွက်တော့ သိပ်တော့ မလွယ်လှဘူး။
ဒါနဲ့ အခု AppFog မှာ node.js + mongodb ကို တင်ပြီးတော့ sample tweet Restful API လေး တင်ထားပေးပါတယ်။
kAFAppDotNetAPIBaseURLString ကို http://sampletweet.ap01.aws.af.cm/ ပြောင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
iOS bootcamp ပွဲမှာ Source code မကူးသွားမိသူများ ၊ ဒါမှမဟုတ် code ကိုလေ့လာချင်သူတွေ အနေနဲ့ github မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်။ iOS folder ထဲမှာ ထည့်ထားပေးပါတယ်။
newPostViewController.m က -(void)newtweet မှာ NSDictionary* userData ကို config လုပ်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged bootcamp, iOS on April 9, 2013 by saturngod. Post navigation
ကံဆိုတာ အကြောင်းတရားတွေ ပေါင်းဆုံပြီး ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးတရားတစ်ခု — saturngod Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod